दोश्रो सातामा छक्का पन्जा कती सफल ? – Nepal News Daily
Home / Nepali Film / दोश्रो सातामा छक्का पन्जा कती सफल ?
admin September 18, 2016	Nepali Film Leaveacomment 724 Views
दोश्रो सातामा आउँदासम्म पनि चलचित्र छक्का पन्जाको व्यापार उस्तै छ । काठमाण्डौका मल्टिप्लेक्समा शो थपिएका छन् । नेपाली र हिन्दी चलचत्रिलाइ समेत यो चलचत्रिलले दोश्रो सातमा कमजोर पारिदिएको छ। चलचित्रका वितरक तथा निर्माताका अनुसार शनिबारसम्म चलचचित्रको व्यापार ५ करोड नजिक पुगेको छ ।
नयाँ नयाँ रेकर्ड राख्दै प्रदर्शनम भैरहेको यो चलचित्रले मोफसलमा पनि व्यापारको तिव्रतालाई निन्तरता दिएको छ । करिब ४ महिना नेपाली चलचत्रको व्यापारमा देखिएको खडेरीलाई छक्का पन्जाले धेरै हदसम्म् राहत दिएको छ ।
शनिबार काठमाण्डौको गाृपिकृष्ण हलमा यो चलचित्रलाई ४ वटा हल दिदा पनि नपुेपछि दर्शकले नाराजाी नै गरेका थिए।
nepali movie	2016-09-18
Tags nepali movie
Previous Priyanka Chopra is the 8th Highest Paid TV Actress in the World
Next छिमेकीले अह्राएका चार जनालाई मन परेन भन्दैमा संविधान संशोधन हुँदैन : अाेली
CHHAKKA PANJA Best Movie: Please Watch CHHAKKA PANJA
Aama Saraswoti Geeta Devi Films Presents! New Nepali Movie: CHHAKKA PANJA Song’s Title: Dekhana Champa …